Ku saabsan AngelBiss - AngelBiss Healthcare Inc.
AngelBiss Healthcare Inc. midka kaliya ee ugu horeeya ayaa diirada saaraya is bedbedelka qalabka oksijiinta wuxuuna xakameyn karaa heerka isbedbeddelka ee ku kacaya 0.1%, inta badan wuxuu ku lug yeeshaa horumarinta, dhoofinta iyo soo saarida wax soo saarka tayada leh ee ku saabsan daaweynta oksijiin, daaweynta qalliinka, daaweynta neefta iyo daaweynta cudurka. Iyada oo leh faa'iidooyin gaar ah iyo awoodo injineernimo oo awood leh, AngelBiss waxay siisay xalka tayo sare leh macaamiisha adduunka oo idil.
AngelBiss dhammaan unugyada alaabooyinka leh heerarka tayada ugu sarreeya iyo waxqabadka ugu fiican. Wax soo saarku waa mid qiimo ku fadhiya oo deegaanka u roon, fududna in la ilaaliyo, taas oo cadeysay kalsoonida ay u qabaan adeegyo tiro badan oo adduunka oo dhan ah.
Si aad wax badan uga barato alaabada AngelBiss iyo adeegyada codsiyada, dhagsii waxyaabaha soo socda:
Xulo AngelBiss, Haddaba u dhig heerka aaminnimada caafimaadkeenna